Otú nyefee Videos site na kọmputa na-iPod aka
> Resource> iPod> otú nyefee Videos etolite na kọmputa na-iPod aka
Chọrọ nyefee vidiyo si na kọmputa na-iPod aka? Ò depụtaghachiri fim gị iPod aka ma ike na-egwu? Ọ bụrụ na ị okosobode ọ bụla nsogbu na-ebufe vidiyo si na kọmputa na-iPod aka, ị ga-agbalị Wondershare TunesGo. Ọ bụghị nanị na-ahapụ gị idetuo vidiyo si na kọmputa na-iPod aka, kamakwa atọghata iPod aka kedi vidoes ka iPod emetụ enyi na enyi formats n'oge na-ebufe usoro. Ke adianade do, ọ ga-eme ka mbụ videos na gị iPod aka dị ka mma. Naanị na 2 nzọụkwụ, ị ga-ọma nyefee videos ka iPod aka.
Download Wondershare TunesGo ịmụta otú idetuo videos ka iPod aka metụ PC. Ọ bụrụ na ị a Mac onye ọrụ, biko download Wonershare TunesGo (Mac).
Otú nyefee vidiyo si na kọmputa na-iPod aka mfe na ngwa ngwa
Download na wụnye a na kọmputa na-iPod aka transfer na kọmputa gị. Soro mfe na mfe nkuzi n'okpuru nyefee ọkacha mmasị gị na vidiyo si na PC gị iPod aka. Ugbu a, ka na-Windows version dị ka ihe atụ.
Nzọụkwụ 1. Mee gị iPod aka
Nke mbụ niile, ẹkedori a na kọmputa na-iPod aka transfer ngwá ọrụ na kọmputa gị. Mgbe ahụ jikọọ gị iPod aka na kọmputa site na eriri USB na ọkụ iPod aka. Mgbe nyefe achọpụta rụọ gị iPod aka, ị pụrụ ịhụ niile ọdịnaya na gị iPod aka ke akpan window.
Cheta na: Biko hụ na ị na-na na arụnyere iTunes na kọmputa gị. Naanị na iTunes arụnyere, Wondershare TunesGo ga-arụ ọrụ nke ọma.
Nzọụkwụ 2. Nyefee fim PC ka iPod aka
Mgbe ahụ, na-ekpe na-n'akụkụ panel, ị nwere ike pịa bọtịnụ "Media". Na media window, mbupụ nkiri na kọmputa na-iPod aka, ị kwesịrị ị na pịa bọtịnụ "Movies" iji bugote nkiri management window. Pịa "Tinye". Nke a ga-eme ka elu a obere faịlụ nchọgharị window. Chọta gị chọrọ fim na kọmputa gị. Ọ bụrụ na usoro nke fim ị mbubata adịghị gị na-akwado iPod aka, a transfer ga Pop elu a obere rektangulu window, nke na-echetara gị ma ị chọrọ iji tọghata faịlụ ka iPod aka kachasị format ma ọ bụ. Pịa "Ee". Mgbe ahụ, a njikwa ga-tọghata ọ na bulite ya na gị na iPod aka.
Wondershare TunesGo n'ụzọ zuru ezu na-akwado iPod aka 5, iPod aka 4 na iPod aka 3 na-agba ọsọ na ọhụrụ iOS 9, iOS 8, ​​iOS 7, ma ọ bụ iOS 5/6. Wondershare TunesGo (Mac) bụ dakọtara na iPod aka 5 na iPod aka 4 na-agba ọsọ iOS 9/8/7/6/5. Mgbe ebufe vidiyo si na kọmputa na-iPod aka, ị nwere ike igwu vidio ke laa kpam kpam. Nwere fun na gị iPod aka. E wezụga na, na Wondershare TunesGo, ị nwere ike nyefee music si iPod aka ka iTunes na kọmputa dị ka mma.
Download free ikpe mbipute nyefee vidiyo si na kọmputa na-iPod aka ugbu a!
Na-ekiri ndị Video Ịmụta otú nyefee Videos site na kọmputa na-iPod aka
Olee otú dezie Playlist on iPod